Maxaa ku Dhici Doona Diimaha? | War Wanaagsan
Maxaa ku Dhici Doona Diimaha?
1. Diin kasta miyay fiican tahay?
Diin kastaba waxaa ku jira dad daacad ah. War fiican wuxuu yahay inuu Ilaahay dadkaas arkayo uuna daneynayo. Laakiin magaca diinta bay dadka qaarkood xumaan iyo shar ku falaan. (2 Korintos 4:3, 4; 11:13-15) Siday wararku sheegaan diimaha qaarkood baa ku lug dheer argaggixiso, xasuuq, dagaal iyo silicdilka iyo faraxumaynta carruurta. Waxyaalahaas dadka daacad ah oo Ilaahay aamminsan way ka xun yihiin.—Akhri Matayos 24:3-5, 11, 12.
Diinta runta ah waxay ammaantaa oona sharaftaa Ilaahay. Laakiinse diinta beenta ah Ilaahay bay ka xanaajisaa. Diinta beenta ah waxay faafisaa tacliin qalad ah oo aan ku jirin Kitaabka Quduuska ah oo ay ka tirsan yihiin beeno ku saabsan Ilaahay iyo dhimashada. Hase ahaatee Yehowah wuxuu rabaa dadkoo dhan inay ogaadaan runta isaga ku saabsan.—Akhri Yexesqeel 18:4; 1 Timoteyos 2:3-5.
2. Maxaa ku dhici doona diimaha?
Farxaddu waxay tahay Ilaahay ma khiyaaneyn karaan diimaha sheegta inay Ilaahay jecel yihiin. Waayo run ahaan waxay jecel yihiin adduunkan uu Shayddaanku maammulo. (Yacquub 4:4) Ilaahay Eraygiisa wuxuu ugu magac bixiyay diimaha beenta oo dhan “Baabuloonta weyn.” Baabuloon waxay ahayd magaalo waa hore jirtay oo ahayd meesha diin been ah lagu bilaabay. Taasi waxay ahayd Nuux waqtigiisii daadkii weynaa kaddib. Mar dhow Ilaahay si aan la filayn buu u keeni doonaa dhammaadka diimaha cadaadiya oona khiyaaneeya binuʼaadanka.—Akhri Muujintii 17:1, 2, 5, 16, 17; 18:8.
Warar badan oo kale oo wanaagsan baa jira. Yehowah muu illoobin kuwa daacadda ah oo ku kala firdhisan adduunkan diimihiisa beenta ah. Dadkaas Ilaahay runtuu baraa siday gacan mid ah u ahaadaan.—Akhri Miikaah 4:2, 5.
3. Dadka daacad ah oo Ilaahay doona inay ka farxiyaan maxaa waajib ku ah?
Diinta runta ah dadka bay isku keentaa
Yehowah wuxuu daneeyaa kuwa run iyo wanaag jecel. Wuxuu rabaa inay diinta beenta ah ka baxaan. Dadka Ilaahay jecel waxay oggol yihiin inay noloshooda beddelaan siday isaga uga farxiyaan.—Akhri Muujintii 18:4.
Qarnigii u horreeyay Ciise dhimashadiisa kaddib rasuulladiisii waxay dadka bareen tacliinta Kitaabka Quduuska ah. Markay dadkii daacadda ahaa taas maqleen si farxad leh bay u aqbaleen. Waxayna Yehowah ka barteen waddo cusub oo ku saabsan nolosha. Taasi waxay ahayd waddo farxad leh oo nolosha ujeeddo iyo rajo siisa. Kuwaasi waa inaa lugu daydo waayo Yehowah bay noloshooda hormariyeen markay warka wanaagsan aqbaleen.—Akhri 1 Tesaloniika 1:8, 9; 2:13.
Yehowah wuxuu soo dhoweeyaa kuwa ka taga diinta beenta ah siday reerka isaga caabuda uga mid ahaadaan. Haddii ad Yehowah wacistiisa diirran aqbashid xiriir gaar ah baad isaga la yeelan doontaa. Oo wuxuu ku siin doonaa reer ku jecel oo ad isaga isla caabudaan iyo nolol weligeed ah.—Akhri Markos 10:29, 30; 2 Korintos 6:17, 18.
4. Sidee buu Ilaahay dal kasta u barakeyn doonaa?
Diimaha beenta ah in la xukumi doono waa war wanaagsan waayo adduunkoo dhan dulmiguu ka raysan doonaa. Mar dambena diimaha beenta ah ma luggooyn doonaan mana kala qaybin doonaan binuʼaadanka. Qof kastoo noolna waxay ku wada midoobi doonaan caabudaadda Ilaaha keliya.—Akhri Muujintii 18:20, 21; 21:3, 4.
Wadaag Wadaag Maxaa ku Dhici Doona Diimaha?